I-China Balcony Glazing System Kinzon08 ifektri nabaphakeli | Kinzon
Uhlelo lwe-Balcony glazing-I-Kinzon08 ivikela i-balcony kunoma yisiphi isimo sezulu. Esimweni sezulu esishisa ilanga, uhlelo lwe-Balcony glazing-I-Kinzon08 kulula ukuyivula ngokuphelele noma ngokwengxenye. Esimweni sezulu esineyimvula nesinomoya u-Balcony glazing system-I-Kinzon08 ivalwa kalula. Uhlelo lwe-Balcony glazing-I-Kinzon08 ivikela ifenisha ye-balcony futhi inciphise isidingo sokugcinwa kwe-balcony.
Uhlelo lwe-Balcony glazing-Kinzon08
Ngenxa uhlelo oluvundlile lwamagiya weBalcony glazing system-I-Kinzon08 ingafakwa kumakhalkoni wanoma isiphi isimo, esiyindilinga nokuyimidwebo. Izakhi zengilazi zigibela kancane emigungundweni enamasheya ahlukene.I-Balcony glazing system-I-Kinzon08 isetshenziselwe izinhlobo eziningi ze-balcony shape, ekhethekile ye-terrace glazing.-Kinzon08 ine-isinxephezelo sokuthola imininingwane ngephrofayili ephezulu esingalungisa igebe phakathi kwewindows nophahla. Uhlelo lwe-glazing uhlelo lweBalcony-I-Kinzon08applies ngokukhethekile i-glue yokuxhuma iphrofayili yengilazi nengilazi, Azikho izimbambo nezimbobo kuphrofayili yengilazi.
I-Balcony glazing system-Kinzon08 esetshenziselwa zonke izinhlobo zesimo se-balcony.
Amaphrofayili wethrekhi ephezulu nangaphansi ayalingana futhi kukhona ubukhulu be-3mm
Uhlelo lwe-Balcony glazing-Kinzon08 lusebenzisa i-nylon cap cap kumaphrofayili engilazi ukugwema ukulinyazwa.
I-Balcony glazing system-Kinzon08 isebenzisa isondo lokuthwala kanye nokuslayida ngokushelela
Sebenzisa i-SS304 kuma-axle we-hinge ukuze ikwazi ukuma ngesisindo esikhulu, gwema amaphaneli engilazi awela phansi
Ububanzi obukhulu bepaneli yengilazi bungu-1100mm kanti ukuphakama kungu-3000mm
usebenzisa i-eccentric ehlelekile ukulungisa ukusatshalaliswa kwangaphambi nangemva kokuphakathi kwephaneli yengilazi
Faka isicelo ngokukhethekile seglue ukuxhuma iphrofayili yengilazi nengilazi, akukho ama-rivets nezimbobo kumaphrofayili engilazi
Sebenzisa ingilazi engu-6mm noma eyi-8mm noma engu-10mm ubukhulu obukhulu kanye nengilazi engu-4 + 4 noma 5 + 5
Izingxenyekazi zekhompiyutha zokuxhumana
Sebenzisa i-SS304 ukuxhuma amaphrofayli wethrekhi ukuqinisekisa ukuqina kokuxhuma
Izinto ezisetshenzisiwe ze-Aluminium alloy 6063T5 zamaphrofayili, okuphezulu kuphathwa nge-tuli ye-electroplating e-tuli
Esedlule: I-Glass Folding Door Kinzon35
Olandelayo: I-Folding Window Curtain Kinzon10
I-Aluminium Doors Windows Kinzon08
Ukugoqa uMnyango We-Kidingon30plus